२०२३ को डीभी खुल्यो, यी पाँच कुरामा ध्यान दिए मात्र छनोट हुने [डिभी भर्ने तरिका सहित] – Jagaran Nepal
२०२३ को डीभी खुल्यो, यी पाँच कुरामा ध्यान दिए मात्र छनोट हुने [डिभी भर्ने तरिका सहित]
Jagaran Nepal बिहिबार, आश्विन २१, २०७८
काठमाडौं । सन् २०२३ को डाइभर्सिटी भिसा (डीभी)को आवेदन आज (असोज २० गते) राति ९ः४५ बजेबाट खुलेको छ । डीभीका लागि आवेदन कात्तिक २३ गतेसम्म दिन सकिने नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ ।
दूतावासले आवेदन दिँदा पाँच कुराहरूमा ध्यान दिन आग्रह गरेको छ । दूतावासले निर्देशनहरूलाई ध्यानपूर्वक पालना गर्न, आवेदनमा आफ्नो परिवारका सबै सदस्यहरूको विवरण उल्लेख गर्न, विगत ६ महिनाभित्र खिचिएको फोटो प्रयोग गर्न, वैध, म्याद नसकिएको
राहदानीको विवरण उल्लेख गर्न र स्पन्सर लगायत अनावश्यक कागजात र सेवाहरूका लागि शुल्क नतिर्न सुझाव दिएको छ ।डीभीको आवेदन निःशुल्क भर्न सकिन्छ । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासको वेबसाइटमा गएर थप जानकारी लिन सकिने दूतावासले जनाएको छ ।
डीभी भर्दा ध्यान दिनुपर्ने पाँच कुरा :१) डीभीका लागि योग्य हुन १२ कक्षासम्मको अध्ययन वा तोकिएको कामको अनुभव हुनुपर्छ । तपाईंसँग यो योग्यता छैन भने डीभी नभर्नुहोला । नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गर्दा सँधैका लागि अमेरिकाको प्रतिबन्ध पनि खेप्नुपर्ने हुनसक्छ ।
२) डिभी भर्दा नाम, जन्ममिति, जन्मस्थान, पासपोर्ट विवरण, फोटो, ठेगाना, फोन नम्बर, इमेल लगायतका विवरणहरु बुझाउनुपर्छ । विगतमा प्रयोग भएको वा ६ महिनाभन्दा पुरानो फोटो डिभी भर्दा प्रयोग नगर्न सुझाव दिइएको छ । कतिपयले पहिले नै डिभी भर्दा प्रयोग भएको फोटो पटकपटक प्रयोग गर्दै आएका हुन्छन् । यस्तो गल्ती नगर्नुहोला । नयाँ फोटो खिचेर डिभी भर्नुहोला ।
३) डिभी भर्दा विवाहितले दम्पत्तिको सबै विवरण र बच्चाबच्ची हुनेहरुले उनीहरुको सम्पूर्ण विवरण उल्लेख गर्नुपर्छ । एकल उल्लेख गरेर भर्दा पर्ने सम्भावना बढी हुन्छ भन्ने भ्रममा परेर समेत कतिपयले एकल उल्लेख गर्छन्, जुन गलत हो । डिभी भर्दा एकल भरेका
विवाहितले डिभी परेपछि समस्या भोग्दै आएका कैयन उदाहरणहरु छन् । त्यस्तै डिभी भर्दा छोराछोरीको विवरण उल्लेख नगरेकाहरुले पनि डिभी परेपछि भिसा लिने बेलामा समस्या भोग्दै आएका छन् । डिभी भर्दा दम्पत्ति र छोराछोरीको सम्पूर्ण विवरण उल्लेख गर्न सुझाव दिइएको छ ।
४) डिभी भर्दा सरकारको आधिकारिक वेवसाइटबाटमात्र भर्नुपर्छ । अक्टोबर ६ पछि सरकारको आधिकारिक वेवसाइटमा डिभी भर्ने लिंक उपलब्ध हुनेछ । त्यसका लागि यहाँ क्लीक गर्नुहोला । कुनै तेस्रो संस्था वा व्यक्ति वा वेवसाइटमार्फत डिभी भर्दा ठगिने र रकम गुमाउनेमात्र होइन आफ्ना विवरणहरु समेत चोरिने सम्भावना हुन्छ ।
५) एउटाभन्दा धेरै आवेदन दिनेहरु स्वतः अयोग्य हुने अमेरिकी सरकारको विदेश मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ । कतिपयले एउटा भन्दा बढी आवेदन दिँदा डिभी पर्ने मौका बढी हुने भ्रममा परेर धेरै आवेदन समेत दिने गरेका छन् । तर यसो गर्दा तपाईका सबै आवेदनहरु डिभीका लागि अयोग्य हुन्छन् । तपाईका कोही आफन्तले तपाईका नाममा डिभी भरिसकेका छन् भने पनि तपाईले अर्को डिभीको आवेदन दिनु हुँदैन ।
कसरी भर्ने डीभी ?अमेरिकाको विदेशमन्त्रालय अन्तर्गतको वेबसाइटमा डीभी चिठ्ठा भर्ने फाराम राखिएको हुन्छ । त्यहाँ आफ्नो तस्बीरसहितको आफ्नो वास्तविक विवरण भर्ने । त्यहाँबाट एउटा कन्फरमेसन कोड दिइन्छ ।डीभी चिठ्ठा आवेदन भरेको निश्चित समयपछि अमेरिकाको विदेशमन्त्रालयले चिठ्ठाको नतिजा सार्वजनिक गर्दछ ।
डीभी भर्ने बेला दिइएको कन्फरमेसन कोडको माध्यमबाट डीभी चिठ्ठा परे/नपरेको निश्चित हुन्छ । यसकारण कन्फरमेसन कोड बिर्सिनु हुँदैन ।यदी डीभी चिठ्ठा परेको भए आप्रवासन भिसाको औपचारिक आवेदन दिनुपर्ने प्राबधान छ । यससँगै आफ्नो शैक्षिक योग्यता र अन्य आवश्यक दस्तावेजहरु पेश गर्नुपर्छ ।
दस्तावेज नेपाली वा अरु कुनै भाषामा भए त्यसको अंग्रेजी प्रति पनि पेश गर्नुपर्छ ।त्यसपछि अमेरिकी अध्यागमन निकायले आवेदकको पृष्ठभूमि अध्ययन गर्छन् । आवेदकको आपराधिक रेकर्ड, विवरण सही भए/नभएको जाँच, मेडिकल जाँच लगायतको अध्ययन गरिसकेपछि अन्तरवार्ताको प्रक्रिया शुरु हुन्छ ।
तर, आवेदकको सबै विवरण सही भएपनि अन्तरवार्ताका लागि छनोट नहुन सक्छन् । डीभी परेका सबैलाई भने अमेरिकाले भिसा दिँदैन । अमेरिकाले डीभी परेका करिव ४० प्रतिशतलाई मात्रै भिसा दिने गरेको बताइन्छ ।छनौट भई अन्तरवार्ता सफल भएमा आवेदकको अमेरिका यात्राका लागि बाटो खुला हुन्छ ।
त्यसपछि तपाईलाई आप्रवासन भिसा दिइन्छ । यद्यपि अन्तरवार्तामा सफल भएका सबैले भिसा पाउँछन् भन्ने पनि हुन्न । तर, भिसा पाएपछि भने अमेरिका यात्राको बाटो खुला हुन्छ ।
पुरुषको स्वास्थ्य यौ,न चाहना र क्यान्सरबाट जोगिने अचूक औषधि हो ब्रोकाउली, जान्नुहोस यस्ता छन् अन्य फाइदा
अर्वपति हुनेहरुको कुण्डलीमा हुन्छ यस्तो खास योग :
अब मलेसियामा न्युनतम बेसिक तलब RM १५०० हुने, भिसामा परिबर्तन !
सुन्दरी बिदेशी चेलिले नेपाली सरकारी स्कुलमा यसरी पढाउँदै, नेपाली बोल्न पनि उत्तिकै खप्पिस (भिडियो)
नयाँ कोरोनाको यस्तो लक्ष्यण देखिनासाथ सतर्क हुनुहोला, नभए थाहै नदिइ ज्यान समेत जान सक्छ …..
राती सपनामा पितृहरु देख्नुको अर्थ के हो ? यस्तो रहेछ गरुड पुराणमा लुकेको रहस्य
आजदेखि बागमती प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातको नयाँ भाडादर लागू
राजु परियारले गाएको यो बर्षको पहिलो देउसिभैलो गीत नै भाइरल बन्यो (हेर्नुहोस)
आफ्ना प्रेमीले गिफ्टमा हिरा दिँदा स्वीकार गर्दिनन् सुष्मिता सेन, यस्तो छ रहस्य
१ बोतलको मूल्य ७२ लाख, यो हो संसारको सबैभन्दा महंगो पानी